Si aad u bedesho noloshaada, beddel caadooyinkaaga
Qoraa iyo taariikhyahan Mareykan ah William Durant wuxuu yiri: Waxaan nahay waxa aan sameyno maalin iyo maalinba. Xaaladdan oo kale, xirfaddu maaha fal, laakiin waa caado. Tani waa run maaha oo kaliya xirfadda, laakiin sidoo kale waa ka soo horjeedkeeda. Caadi ahaan, natiijada caadooyinka caadiga ah. Taas macneheedu waxa weeye in aad ku kori karto heerka garaadka adiga oo bedelaya caadooyinkaaga. Si kastaba ha ahaatee, ma dammaanad qaadaan guusha. Haddii aad nuqul ka sameyso caadooyinka Elon Musk, ma noqon doontid Elon Musk kii labaad. Waxaad u baahan tahay inaad si buuxda u bedesho dhaqankaaga.
Ganacsade Darius Foroux ayaa ku dhajiyay boggiisa sida loo horumariyo oo aad ugu adkaysato caadooyinka aad u baahan tahay.
1. Go'aanso caadooyinka aad u baahan tahay
Waxaan maqalnaa wax ku saabsan caado waxtar leh oo isla markiiba go'aansanay inaan ku darno nolosheenna. Laakiin ka fiirso haddii aad runtii u baahan tahay. Runtii ma u baahan tahay inaad kacdo shanta subaxnimo, orod ama cun khudaar ceeriin?
Waxaa laga yaabaa inay runtii waxtar kuu yeelato inaad goor hore kacdo. Mise waxaa laga yaabaa inaad subaxdii xanaaqdo oo xanaaqdo, oo ay maalinta oo dhan kharribto. Haddaba is waydii in caadadani ay kor u qaadi doonto tayada noloshaada.
Intaa waxaa dheer, waa in ay jirto sabab la taaban karo oo isbedel ah. Tusaale ahaan, waxaad rabtaa inaad hal buug akhrido toddobaadkii, laakiin maxaad ugu baahan tahay? Maxay ku siin doontaa? hadafkee ayaa kaa caawin doona inaad gaarto? Tixgeli tan oo dooro caadooyinka kuu soo dhowaan doona natiijada la rabo.
2. Ka shaqee caadooyinka hal mar
Mararka qaarkood waxaad dooneysaa inaad wax walba ku beddesho naftaada hal mar. Waxaad go'aansatey inaad wax badan akhrido, u shaqeyso si waxtar leh, cunto caafimaad leh, jimicsi. Xaaladdan oo kale, waxa fiican in aad hoos u dhigto xamaasaddaada. Wax ka qabashada caadooyinka badan hal mar waxay naftaada u abuuri doontaa culays aan loo baahnayn.
Waynu is-qiimaynaa nafteena. Waxaan u maleyneynaa inaan wax badan ku guuleysan karno waqti yar gudaheed. Tani run maaha. Laakiin muddo dheer waa wax la samayn karo. Markaa diiradda saar hal caado, xoojiya. Ka dibna kaliya wax ka qabso kan ku xiga.
3. Ha dhaafin baarka
Ha isku dayin inaad dhaqso u beddesho. Ku bilow wax yar:
Ma doonaysaa in aad oroddo? Ku bilow socodka.
Ma rabtaa inaad buug qorto? Qor hal jumlad markiiba.
Ma doonaysaa in aad samaysato ganacsi kuu gaar ah? Hel ugu yaraan hal macaamiil
Ma doonaysaa in aad akhrido laba buug todobaadkii? Ka bilow hal bog maalintii.
Ma rabtaa inaad lacag kaydsato? Ha iibsan dhar aad hal mar xidhato.
4. Isticmaal liiska hubinta
Waxa kale oo ay dhacdaa in aad bilowday inaad samaysato caado cusub, laakiin ugu dhakhsaha badan ayaad illowday. Waxaa jira xaalado badan oo lama filaan ah oo nolosha ah. Waxay u muuqataa ok haddii aad seegto maalin ama laba. Laakiin sidaas uma fududa. Haddii aad dayacdo joogtaynta, caado waligeed ma samaysmi doonto. Isticmaal liiska hubinta si aad naftaada u xasuusisid waxa aad hiigsanayso iyo si aad u ilaaliso horumarkaaga.
Xusuusnow, waxaad horumarinaysaa caadooyin aad ku fiicnaan lahayd. Hubi liiska hubinta maalin kasta. Maalin maalmaha ka mid ah waxaad la yaabi doontaa sida ay noloshaadu isu beddeshay oo ay ugu wacan tahay dhawr caadooyin oo fudud.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Si aad u bedesho noloshaada, beddel caadooyinkaaga!